United Airlines iyo Air New Zealand waxay bilaabeen duulimaad aan joogsi lahayn oo Newark-Auckland ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » United Airlines iyo Air New Zealand waxay bilaabeen duulimaad aan joogsi lahayn oo Newark-Auckland ah
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Mareykanka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Air New Zealand iyo United Airlines maanta ayaa ku dhawaaqday adeegga kaliya ee aan joogsiga lahayn ee u dhexeeya New Zealand iyo Mareykanka Xeebta Bariga waxay bilaaban doontaa Oktoobar 2020. Air New Zealand ayaa ku dhawaaqday inay bilaabi doonto seddex jeer seddex jeer usbuucii adeeg cusub oo aan joogsi lahayn oo u dhexeeya Auckland iyo New York / Newark, taasoo sii xoojinaysa xiriirka wadajirka ah ee ka dhexeeya Air New Zealand iyo United Airlines.
2018, Air New Zealand iyo United Airlines waxay ku dhawaaqeen adeeg cusub oo aan joogsi lahayn oo Air New Zealand ah oo u dhexeeya Chicago iyo Auckland.
"Duullimaadka aan joogsiga lahayn ee Air New Zealand wuxuu yareynayaa waqtiga safarka illaa saddex saacadood, taasoo New Zealand u sahli doonta inay gaarto New York iyo Bariga Xeebta Mareykanka," ayuu yiri Jeff McDowall, oo ah ku simaha Madaxa Fulinta ee Air New Zealand. "Waa wax cabsi leh waxaan ka dhigi karnaa safar aan kala go 'lahayn oo dhab ah Kiwis oo raba inuu waayo aragnimo u yeesho New York iyo socdaalayaasha Mareykanka ee ku soo daray New Zealand liistooda baaldiga waxaana rajeyneynaa inaan iskaashi la sameyno United Airlines si aan u korino safarka labada dhinac."
“Iskaashiga xoogan ee isbahaysiga istiraatiijiyadeed ee United ay la leedahay Air New Zealand waxay macaamiisheenna siineysaa fursado badan oo ay ku kala safraan Mareykanka iyo New Zealand marka loo eego duulimaadyada kale ee adduunka, waana ku faraxsanahay inaan iska kaashano adeeggan marki ugu horreysay ee aan joogsiga lahayn ee isku xiraya New Zealand iyo shirkaddayada. xarunta garoonka diyaaradaha ee Newark Liberty International, ”ayuu yiri John Gebo, madaxweyne ku xigeenka sare ee United ee xulafada. "Waxaan ku faraxsanahay inaan u fidino macaamiisheenna la wadaagayo ikhtiyaar kale markaan qorsheyneyno safar aan ugu aadno New Zealand quruxdeeda iyadoo aan si ku habboon ugu xiri karno booqdayaasha in ka badan 90 meelood oo Mareykanka ah oo keliya oo xiriir keliya la isugu tagi karo xaruntayada New York."
Adeegga New Zealand ee u dhexeeya New York / Newark iyo Auckland
Air New Zealand waxay ku shaqeyn doontaa seddex jeer usbuucii, sanadka oo dhan iyada oo adeegsan doonta diyaaradeeda cusub ee Boeing 787-9 Dreamliner. Waqtiga duulimaadku wuxuu noqon doonaa ugu yaraan 17 saacadood iyo 40 daqiiqo dhanka koonfureed iyo 15 saacadood 40 daqiiqo woqooyi.
Adeegga wadaagga koodhka Air New Zealand waxaa lagu bixin doonaa 90 duulimaad oo ku kala yaal Mareykanka oo dhan si loogu helo isku xirnaan habboon oo Auckland ah oo loo maro New York / Newark. Diyaaradda United Airlines waxay ka duusho duulimaadyo badan xarunteeda garoonka diyaaradaha ee Newark Liberty International Airport in ka badan duullimaadyada kale, iyadoo in ka badan 400 oo duulimaadyo ka sameysato Mareykanka iyo adduunka oo dhan.
Duulista No. Waxaa shaqeeyay Dayuurad Ka bixitaan Imaansho Frequency
06: 45+2 maalmood
Iyadoo ku xiran Ansixinta Dowlada
Waqtiyada kor ku xusan waa la beddeli karaa